dimanche, 19 juin 2016 23:41
Tahirim-bolampanjakana: natomboka ny fampiasana ny karatra fanilo
Telo volana lasa teo ho eo no efa nanandramana ny fampiasana ny Karatra Fanilo na ilay karatra SPECL na ny “System de Paiement Electronique de Carburant et de Lubrifiants », ho an’ny sampandraharaham-panjakana manerana ny nosy.
dimanche, 19 juin 2016 22:32
Toamasina: Fankalazana ny faha 40 taonan'ny antoko Arema
Tamin'ny 11ora sy 20min no nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy ny fiaramanidina nitondra an'Atoa Ratsiraka Didier Ignace sy Ramatoa vadiny ary ny zanany vavy Annick Ratsiraka.
samedi, 18 juin 2016 10:16
Ambohipo: Taxi-be 164 tapaka frein
Nitrangan-doza vao maraina be anio tetsy Ambohipo, raha iny hidina ilay fidinam-be hiazo ny tsena ity taxi-be iray dia nandositra ny isatra, na ny frein, ka dia nitady kaly ny mpamily, ka tamin'ireo fiara nijanona tamin'ny sisiny no nandefasany ilay minibus nentiny.
vendredi, 17 juin 2016 13:45
Asa fanaovan-gazety: Tazonina ho tompon'antoka ny tompon'ny orin'asa sy ny imprimerie
Raha ny lalànan'ny asa fanaovan-gazety eto amintsika dia raisina ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra soratan'ireo mpanao gazety ny tompon'ny orin'asa, patron de presse. Izany hoe tsy maintsy ho voavakin'ny patron de presse daholo ve izany ireo asa soratry ny mpanao gazety ao aminy izay tokony hanana fahalalahana ihany koa.Lasa manao ny asan'ny Redchef na Tonia famoahana ve izany ny Patron de presse.
vendredi, 17 juin 2016 10:00
Université-Bâtiment rose: Lasa tranon'ny masera
Araka ny fandaminana eo anivon'ny CROUA moa dia nasiana fepetra ny trano vaovao ipetrahan'ny ny mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo Ankatso Antananarivo. Anisan'izany ny fametrahana sarany 50 000 ariary isan-taona, ny tsy fahafahana mampiasa herinaratra andrahoan-tsakafo, na ny résistance izany, fa midina any ambany mampiasa saribao, nosarahina ihany koa ny Bâtiment misy ny vavy sy ny lahy.
vendredi, 17 juin 2016 09:39
EPP Ambohipo: Lasa toeram-pivavahana maharitra ny tokotanim-pianarana
Efa ho herin'andro izao dia namelarana trano labasy ny tokontanin-tsekoly fampianarana EPP eny Ambohipo. Isakariva dia lasa fotoam-pivavahana ny anaty labasy, ny atoandro kosa dia tsy afaka milalao intsony ny ankizy fa dia lasa fialofana hisakafoanana maraina, sy lasa aro amin'ny orana sy ny hatsiaka ny trano labasy.
mercredi, 15 juin 2016 11:35
Alaotra : Hazo sarobidy 343 sarona
Nahomby ny ezaka fanaraha-maso ny ala izay nataon'ny sampandraharahan'ny tontolo iainana any Alaotra Mangoro. Hazo sarobidy voamboana 223 tratra tany Andilamena ary 120 sarona tao amin'ny kaominin'i Didy, distrika Ambatondrazaka, herinandro vitsy lasa izay.
mardi, 14 juin 2016 23:02
Antenimierandoholona : Nifidy ireo solontenany ho eo anivon'ny HCJ, CENI, HCDDED ary HCC
Notanterahina ny talata 14 Jona 2016 ny fifidianana ireo hisolontena ny Antenimierandoholona handrafitra ny Fitsarana Avo (HCJ) sy ny Vaomiera mahaleotena manokana misahana ny fifidianana (CENI), ny Filàn-kevitra ambony Miaro ny Demokrasia sy ny Tany tan-dalàna (HCDDED) ary ny Fitsarana Avo momba ny Làlampanorenana (HCC).
lundi, 13 juin 2016 22:15
Akademia Miaramila : Natolotra ny mariky ny andiany faha-38
Natolotra tamin’ny fomba ofisialy ny alatsinainy 13 Jona ny marika famantarana ny andiany faha-38 ao amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe, ka ny Ray mpiahy ity andiny ity, ny Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa no nanolotra izany.
lundi, 13 juin 2016 21:11
Fohano ny didy fisamborana an’i Loholona Lylison
Nampiantso ny mpanao gazety io hariva io ireo Mpisolovava, Maître RATOANDROMANA Lucien sy RAKOTOSON Haja tao amin’ny Hôtel Le Louvre Antaninarenina.